Sharciga Qaxootiga Puntland oo Garoowe Lagu Soo Bandhigay-Sawiro | SAHAN ONLINE
Sharciga Qaxootiga Puntland oo Garoowe Lagu Soo Bandhigay-Sawiro
GAROOWE-wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Puntland ayaa caasimadda Garooe ku soo bandhigtay sharciga qaxootiga ee Puntland oo dhawaan xubnaha barlamaanku ay meelmariyeen ayaa maanta lagu soo bandhigay Caasimadda Garoowe. waxaana ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshadda iyo xubno ka mid ah qaxootiga ku nool dalka.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur “ Jubba” oo kullanka furay, waxaa uu sheegay in sharcigan uu si cad u qeexayo xuquuqaha ay leeyihiin dadka qaxootiga ku ah Puntland iyo waxyaabaha laga doonayo inay ilaaliyaan oo ugu horrraysay qanuunka iyo sharciyadd wadanka qaxootinimada siiyay
“ sharciga qaxootiga waxaa la diyaariyay sanadkii hore. bishii january ee sanadkan 2017 ayaa gollaha Wasiirada Puntland ayaa ansixiyay, Bishii August ayaa xubnaha barlamaanku uu meel mariyay, dhawaana uu ku soo bixin doono faafinta rasmiga ee dowladda “ ayuu yiri Agaasimuhu.
Agaasimaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maxamed Cali Nuur “Jubba”